लहानमा डा. सिके राउतको गोप्य बैठक, प्रहरी र पत्रकारलाई निषेध - BP Bichar
My Apeal to my Respected sisters and brothers,
Home/समाचार/लहानमा डा. सिके राउतको गोप्य बैठक, प्रहरी र पत्रकारलाई निषेध
लहानमा डा. सिके राउतको गोप्य बैठक, प्रहरी र पत्रकारलाई निषेध
BP BicharMarch 17, 2019
लहानःसरकारसँग भएको ११ बुँदे सहमतिको विषयमा छलफल गर्न सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको राष्ट्रिय परिषद् बैठक सिरहाको लहानमा शुरु हुँदैछ। गठबन्धनका तर्फबाट संयोजक राउतले सरकारसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिपछि अगामी रणनीतिको विषयमा छलफल गर्न परिषद् बैठक बोलाएको बताएका छन्। बैठकमा तराई मधेस अन्तर्गत हरेक जिल्लाका दुईदेखि तीन जना र गठबन्धनका केन्द्रीय पदाधिकारीसहित करिब ९० जना सहभागी हुने बताइएको छ । लहान नगरपालिका ७ स्थित मारवाडी सेवा सदनको सभाकक्षमा हुने बैठकमा सहभागी हुन राउत आइतबार दिउँसो त्यहाँ पुग्ने बताइएको छ । बैठकमा सहभागीलाई सदनमै खाने बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकमा सहभागी हुन आउने हरेकलाई आफ्नो नागरिकता अनिवार्य गरिएको भनिए पनि त्यसको पुष्टि भने भएको छैन।
बैठक स्थलभित्र प्रहरी तथा सञ्चारकर्मीलाई पनि प्रवेश निषेध गरिएको छ। सदनको मूल गेटमा कालो चस्मा र मास्क लगाएर बसेका गठबन्धनका कार्यकर्ताले विभिन्न जिल्लाबाट आएका कार्यकर्ताहरुको झोला, शरीर खानतलासी गरी आधिकारिक परिचय पत्र देखाएपछि मात्र प्रवेश गर्न दिएका छन्।
परिस्थितिको समिक्षा गर्दै युद्धस्तरमा अघि बढौं
कांग्रेस हराउने अन्तर्घाती बचाउन रामचन्द्र र डा.आरजुवीच घम्साघम्सी
सरकारसँग जनताको पीडा बुझ्ने हृदय नै छैन : देउवा